Uhlu lwe-imeyili lwaseSingapore | Imininingwane Yebhizinisi LaseSingapore | Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwe-imeyili lwe-Singapore
Uhlu lwe-imeyili lwaseSingapore luqukethe imininingwane yokuxhumana yebhizinisi yaseSingapore. Imininingwane ye-90% yokuxhumana kwebhizinisi enembile kusuka kulolu hlu lwe-imeyili lwaseSingapore.Ungafinyelela kumuntu webhizinisi laseSingapore kalula ngalolu hlu lwe-imeyili lweSingapore. Database Lokugcina Lokuposa Lokunikeza Wena Uhlu Lwama database we-imeyili wase-Singapore wokudala imikhankaso yakho Yokukhangisa Nge-imeyili inkampani yakho.
Uhlu lwethu lwe-imeyili lwaseSingapore luqinisekisiwe futhi luvuselela uhlu lwe-2019. Uma ufuna ukumaketha imikhiqizo noma izinsizakalo zakho eSingapore sicela usebenzise i-database yethu ye-imeyili ukudala imikhankaso yakho yemeyili e-inthanethi e-Singapore. Uma ufuna ukukhuthaza imikhiqizo noma izinsizakalo zakho eSingapore ungasebenzisa leli kheli lokuthengisa le-imeyili. Kuzokusiza ukuletha ithrafikhi evela eSingapore futhi ungaguqula leli thrafikhi libe nokuthengisa. Sakha nemininingo egciniwe yokuthumela imeyili evela kuleli lizwe nethimba lethu labakhi be-imeyili. Eqenjini lethu labakhi be-imeyili sinabantu abane-20 abanolwazi abakha ngaso sonke isikhathi uhlu lwakho lwe-imeyili oluhlosiwe.
Uhlu lwe-imeyili Yebhizinisi LaseSingapore
Singapore B2B Ikheli le-imeyili
Uhlu lwe-imeyili ye-imeyili yebhizinisi laseSingapore luzokunikeza lonke ulwazi lokuxhumana lwebhizinisi laseSingapore elisebenzayo. Ungasebenzisa le datha ye-imeyili yebhizinisi lase-Singapore yemikhankaso yokuthengisa ye-imeyili yenkampani yakho.
Uzofinyelela kubantu basebhizinisi baseSingapore abavela kule database ye-imeyili. Ngaphezu kwakho konke imininingwane ngalolu hlu.
Thenga uhlu olusha lwe-imeyili ye-Singapore B2B entsha neVuselelwe
* Igama Lenkampani * Igama Lomuntu Oxhumana Naye * Ikheli
* I-ID ye-imeyili * Inombolo yocingo * Inombolo yefekisi * Isigaba
Uhlobo lwefayela: Ifayela likaNks Excel / Csv
(Imali yesikhathi esisodwa ayikho inkokhelo ephindaphindwayo)
Singapore Uhlu imeyili Umbuzo & Impendulo